DEG DEG: Xaliimo Yareey oo xilkeedii ku weysay heshiiska Villa Somalia - Awdinle Online
DEG DEG: Xaliimo Yareey oo xilkeedii ku weysay heshiiska Villa Somalia
Illo- Wareedyo ka agdhow shir-madaxeedka doorashada Soomaaliya ee ka socda Muqdisho ayaa sheegaya in dhinacayada shirku ay gaaraan heshiis doorasho, isla markaana Shirka Shirka soo geba-gabeeyay.
Wararka horudhac ah ah ayaa waxaa ay sheegayaan inay ku heshiiyeen in doorashada ay maamulaan Guddiyo heer federaal iyo heer dowlad-goboleed ah, taasi oo ka dhigan in meesha laga saaray Guddiga Doorashooyinka Madaxa-bannaan ee ay hoggaamiso Xaliimo Yareey.
Warka ayaa waxaa sidoo kale ay sheegayaan in lagu sheegay in Ergada wax dooraneysa at noqdaan 101 Ergo taas oo la dhigay in la aqbalay dalabkii Maamul Goboleedyada.
Agaasime kuxigeenka Madaxtooyada Soomaaliya ahna kusimaha Agaasimaha Cabdi Nuur Maxamed Axmed ayaa bartiisa Twitter-ka ku shaaciyay in Shirka la soo geba dambeeyay, isla markaana Warsaxaafadeed laga soo saari doono.
Previous articleDad ku dhintay Roob dabeylo watay oo ka da’ay Puntland
Next articleWarmuriyeed laga soo saaray Shirkii Madaxweyne Farmaajo iyo Dowlad Goboleedyada